YEYINTNGE(CANADA): Saturday, May 28
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/28/20110အကြံပြုခြင်း
U Nay Meinda
၁။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ လူတစုသာပိုင်တဲ့ ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအားလုံးစုပေါင်းပြီးပိုင်တဲ့ အားလုံးပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်။
၂။ဒီလိုပိုင်တာကြောင့် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား လူများစုက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်းကို ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ် အဖွဲ့ကသာလျှင် ဒီတိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်။
၃။အုပ်ချုပ်တဲ့အခါ ထင်သလို အရမ်းမအုပ်ချုပ်ရဘူး။ပြည်သူလူထုက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ရွေးကာက်တင် မြောက်ထားတဲ့ အမတ်တွေက ရေးဆွဲပြီး အတည်ပြုပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေအရ တိုက်ဖျက်ပိုင်ခွင့် အစရှိတဲ့ ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးရဲ့ မွေးရာပါမူလ အခွင့်အရေးများကို ခိုင်ခိုင်လုံလုံ အာမခံထားတဲ့ ဥပဒေတွေရှိရမယ်။
၄။ပြည်သူလူထုဟာ ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိတဲ့လူတွေလို နေနိုင်အောင် လွတ်လပ်စွာ ဟောပြောခွင့်၊ ကိုးကွယ်ခွင့်၊ စီးပွါးရှာဖွေခွင့်၊ မတရားဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများကို ဥပဒေအရ တိုက်ဖျက်ပိုင်ခွင့် အစရှိတဲ့ ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးရဲ့ မွေးရာပါမူလ အခွင့်အရေးများကို ခိုင်ခိုင်လုံလုံ အာမခံထားတဲ့ ဥပဒေတွေရှိရမယ်။
၆။ပြည်သူလူထု လူများစုရဲ့ ထောက်ခံမှုကို မရတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ ဟာ အလိုအလျောက် ရာထူးကနှုတ်ထွက် ပေးရမယ်။
၇။အခုပြောခဲ့တဲ့ အဓိကအချက်တွေကို လက်ခံနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးသဘောတရားဟာ တရားမျှတခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်း၊ ညီမျှခြင်းဆိုတဲ့ လောကပါလတရားတွေကို အခြေခံထားတဲ့ သဘောတရားဖြစ်တယ်။ ဒီသဘောတရားကို ဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီ မရှိတဲ့နိုင်ငံမှာ လူဖြစ်ရတာဟာ ဂွေးသင်းခံထားရတဲ့ နွားဖြစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ မခြားနားပါဘူး ။ အဲဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီဖျက်ဆီးသူမှန်သမျှကို ခံချရမယ်။တိုက်ထုတ်ရမယ်။
ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျား အခုတက်လာတဲ့ အစိုးရသစ်ဟာ ခုဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီပါသလား။
စဉ်းစားဝေဖန်ဆုံးဖြတ်၍ မညီပါက ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်ကြပါ။
28 May 2011 Yeyintnge's Diary.doc
28 May 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
723K View Download
28 May 2011 Yeyintnge's Diary
ပင်လယ်ထဲမျောပျောက်ဆုံး ရေလုပ်သားများရဲ့ ဇနီးသည်တွေနစ်နာကြေးမရ
ယခုတလော စစ်တွေမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ သတင်းကတော့ ကြံ့ဖွံ့ ပါတီ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်ရင် သူများသားမယားကို ကြာကူလီရိုက်တဲ့ သတင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုလို သူများမိန်းမကို အိုးတန်းရပ်ကွက်က အိမ်တစ်ခုမှာ ကြာကူလီ ရိုက်နေတုန်း အိမ်က မိန်းမဖြစ်သူမှ လက်ပူး လက်ကြပ်မိတဲ့ အတွက် မိန်းမ နှစ်ဦး ထွေးလုံးရိုက်ပုတ်ကြတာက တရုတ်သိုင်းကားတွေလောက် ကြည့်မကောင်းပေမယ့် လောလောဆယ်မှာတော့ စစ်တွေမှာ လူတွေ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ အပြောအများဆုံး သတင်း ဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
By ရော်နီညိမ်း စနေ, 28 မေ 2011
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ မဟုတ်ဘူး ကိုရော်နီ။ အဲဒီအချိန်အခါမှာ ခင်ဗျား သတိထားမိလိမ့်မယ်။ (အမေ ရိကန်မှာ) ကလင်တန် (သမ္မတ Bill Clinton) အစိုးရပြောင်းပြီးတော့၊ ဘွတ်(ရှ်) (သမ္မတ George W. Bush) အစိုးရ တက်တော့မယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်တို့က ဒီမှာ (၀ါရှင်တန်ဒီစီ) ရောက်နေပြီ။ ကျနော်တို့ကိုလည်း (ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက) green light ပေးထားတာက၊ ဘွတ်(ရှ်) အစိုးရကို lobby လုပ်ဖို့ပေါ့ဗျာ။ ငွေကုန် ကြေးကျ အတော်ကို အကုန်ခံပြီးတော့ D.C.I. လို lobby ကုမ္ပဏီကို ငှားပြီးလုပ်ကြတဲ့ အချိန်ကျတော့၊ ထင် ကြတာက၊ အမေရိကန်နဲ့ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ သူတို့ (ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေတို့ )ထင်ကြတယ် ခင်ဗျ။
(D.C.I. = အမေရိကန် Republican ပါတီကို ထောက်ခံသည့် lobby အုပ်စု ဖြစ်သည်။ D.C.I.ကို ငှားရမ်းသူ များက မိမိတို့အကျိုးအတွက် Republican ပါတီခေါင်းဆောင်များကို စည်းရုံးနိုင်ရန်၊ နိုင်ငံရေး သံတမန်ရေး စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှုများအဖြစ်၊ ငှားရမ်းသူများနှင့် Republican ပါတီခေါင်းဆောင်များကြား၊ ဆွေးနွေး ပွဲ စားပွဲသောက်ပွဲပါတီပွဲများ၊ ဖန်တီးစီစဉ်ပေးသည့် တရားဝင်ကြားပွဲစား lobby ကုမ္ပဏီကြီး ဖြစ်သည်။ သမ္မတ George W. Bush ၏ ဒုသမ္မတ Dick Chaney ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် D.C.I.သည်၊ မြန်မာစစ် အ စိုးရ၏ ငှားရမ်းခံရမှုကြောင့် နံမည်ပျက်သွားခဲ့ကာ၊ မြန်မာစစ်အစိုးရအတွက် lobby လုပ်ခဲ့သော D.C.I. ကို စတင်တည်ထောင်သူ Dough Davenport နှင့် D.C.I. ၏ CEO အမှုဆောင် အရာရှိကြီး Douglas Goodyear တို့ နှစ်ဦးမှာ၊၊ ၂၀၀၈ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင်၊Republican ပါတီ သမ္မတလောင်း John McCain ၏ စည်းရုံးရေးမှူးများအဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ပေးခဲ့ရသည်။ Ref: DCI Group: Controversies: Myanmar Representation )
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ မှန်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီပဲယင်းကိစ္စ ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ၊ အားလုံးသိ တဲ့အတိုင်း တကမ္ဘာလုံးရဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ အဆူခံအဆဲခံဘ၀နဲ့ ဘယ်သူကမှ (မြန်မာစစ်အစိုးရကို) အယုံအကြည် မရှိဘူးဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုးတွေ ASEAN အပါအ၀င်မှာ အားလုံး ဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာ၊ အရင်ဆုံး တရုတ်ဆီကို သွားပြီးတော့ သူတို့ (မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကို) ရပ်ပေးဖို့ဆိုပြီး၊ ဒူးထောက်ခဲ့ရတဲ့ အနေအထားမျိုးက ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီပဲယင်းကိစ္စ ပြီးကတည်းက ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့၊ ဆိုရမှာပဲ။
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ မကြာသေးခင်ကပဲ တရုတ်က စစ်ရေးခေါင်းဆောင်နဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် တွေ၊ မြန်မာပြည်ကို လာလည်သွားတာ ရှိပါတယ်။ တရုတ်က အဓိက မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုကို လိုချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့ နေရမှာ၊ အထူးသဖြင့် နယ်စပ်ဒေသမှာ တည်ငြိမ်ဖို့ အတွက်ကို (မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့) ကိုးကန့်တွေ “၀” တွေနဲ့ စစ်မဖြစ်ဖို့ကိစ္စ၊ အေးအေးချမ်းချမ်းဖြေရှင်းဖို့ ကိစ္စတွေကို၊ တရုတ်က အတော်လေး အလေးအနက် ထားတဲ့ အနေအထားမျိုး ရှိပါတယ်။
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ အဲဒီကိုးကန့်ကိစ္စ မဖြစ်ခင်၊ ၂၀၀၈ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ၊ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန် ကြီး မြန်မာနိုင်ငံကို လာပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့အဖွဲ့နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေ ခေါင်းဆောင်တဲ့ အဖွဲ့နဲ့၊ အစည်းအဝေးခန်းမှာ တွေ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအစည်းအဝေးခန်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စလေးတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ၂၀၀၇ခုနှစ် သံဃာ့အရေးအခင်း၊ နောက်မကြာခင်မှာပဲ ၂၀၀၈ခုနှစ် နာဂစ်မုန်တိုင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၊ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်တိုင်ကပင် ကြေညာချက်ထုတ်ပြီး မြန်မာအစိုးရကို ပြောရဆိုရတဲ့ အနေအထားတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်လည်း ငပွကြီးမြန်မာစစ်အစိုးရကို လိုက်ပြီး အကာအကွယ်ပေးနေရ တော့၊ မျက်နှာပူပုံပေါ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အတိုင်း၊ လိုက်နာဖို့ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးကိုယ်တိုင် ပြောတဲ့အခါမှာ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေက သူ့ကို အဲဒီလို ပြောရပါ့မလားဆိုပြီး၊ တရုတ်နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီးကို လုံးဝစကားပြန်မပြောတော့ဘူးလို့၊ ကျနော်တို့ သိရပါတယ်။ ဒီအစည်းအဝေးက နည်းနည်း ဆူဆူပူပူလေး အနေအထားမျိုး ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း အဲဒီအစည်းအဝေးရဲ့နောက်မှာ၊ ၂၀၀၉ခုနှစ် က ကိုးကန့်အရေးအခင်းက ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ “မလုပ်ပါနဲ့” လို့၊ တရုတ်က မေတ္တာရပ်ခံနေတဲ့ ကြားထဲက၊ ဒီလို လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ၊ ခုန ကိုရော်နီပြောတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ ဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့ ဗျာ။ ဒီအပေါ်မှာ တရုတ်က အခုချိန် ထိ သံသယက ရှိနေတယ်။ မြန်မာအစိုးရကို မယုံဘူး။ မယုံလို့လဲ၊ အခု ထပ်ခါထပ်ခါ လာပြီးတော့၊ သတိပေး နေတဲ့ အနေအထားမျိုးရှိနေတယ်လို့၊ ကျနော်တို့ ပြောလို့ရတယ် ခင်ဗျ။
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ အချိန်မရွေး ပေါက်ကွဲသွားနိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုး ရှိပါတယ်။ တရုတ်ကလည်း၊ နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ “၀” တို့ ကိုးကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတို့ကို သူတို့ရဲ့လက်နက်တခုလို ကိုင်ထားတာပဲ။ တရုတ်က စိုးရိမ်နေ တာက မြန်မာပြည်ထဲက တရုတ်လူမျိုးတွေ၊ တရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ အကျိုးစီးပွား တွေကိုပါ။ ဒါတွေကို မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ အကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ အာမခံချက်က၊ တရုတ်က အလိုချင်ဆုံး ပါ။ (တစ်) အဲဒီအာမခံချက်ကို အခုသွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်က မဖြစ်မနေ ပေးခဲ့ရမှာပါ။ (နှစ်) က နယ်စပ် ဒေသကိစ္စ။ အခု တရုတ်စစ်ကောက်မရှင်ရဲ့ ဒုဥက္ကဌ ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်၊ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်မှာ ရှိတဲ့ နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေ အောက်ခြေက တပ်တွေမှာ၊ အပြန်အလှန် အစည်းအဝေးလုပ်ကြဖို့ အဆက်အသွယ်လုပ် ကြဖို့ ဆိုတာတွေကို၊ မြန်မာဘက်က သဘောတူပေးခဲ့ရ တာတွေ ရှိပါတယ်။ အခု ဒါကို ထပ်ပြီး သဘောတူခဲ့ရ မှာပါ။ အရင်တုန်းက ဒါမျိုးတွေက မရှိခဲ့ဘူး။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ အခု ပြည်သူလူထုဘက်က အပိုင်းကို ပြန်ကြည့်ကြရအောင်။ ရှေ့ကနေပြီး တော့မှ တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေကြတဲ့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေက၊ အခုလို မီးနဲ့ကစားသလို၊ တရုတ်နဲ့သွားသွားပြီးကစား တဲ့အခါ၊ ဟိုဟာဖြစ်လိုက် ဖြစ်လိုက်၊ ကိုယ့်ထက်အားကြီးတဲ့လူနဲ့ သွားကစားတိုင်းမှာ ကိုယ့်မှာက အရှုံးပဲပြပြ လာ။ တရုတ်က မြန်မာပြည်ထဲမှာ နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကို လာပြီးတဖြည်းဖြည်းချုပ်ကိုင်လာ။ အဲဒီတော့ လူထု ရဲ့ဒေါသက၊ မြန်မာအစိုးရအပြင် တရုတ်ဘက်ကို လှည့်မသွားနိုင်ဘူးလား။ အဲဒီအခါကျရင် မြန်မာအစိုးရက ဘယ်လိုထိန်းမလဲ။ အခု နေရာတကာမှာ တရုတ်ကို အကုန် ဦးစားပေးနေရတယ်။ သွားပြီး မီးနဲ့ကစားတိုင်း၊ မနိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေက ဖြစ်ဖြစ်လာနေတော့၊ အဲဒီအခြေအနေမျိုးမှာ၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ အနေအထားက ဘယ်လို ဖြစ်မလဲ။ တရုတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့။
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ ပြောရရင်တော့၊ တရုတ်လို အမေရိကန်လို အိန္ဒိယလို အင်အားကြီးနိုင်ငံကြီး တွေကို၊ သွားသွားပြီးတော့ နိုင်ငံရေးကစားနေတာက၊ ခုချိန်ထိ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေပဲ ဒါတွေ လုပ်နေတာ။ သူ့ကိုယ်သူ လည်လှပြီ၊ နိုင်ငံရေးနားလည်လှပြီ ထင်နေတာ။ ဟိုလူတွေက ပိုပြီး လည်တယ်၊ သူ့ထက်ပိုပြီး ပညာရှိတယ်။ အခုအတိုင်း ဆက်သွားရင်၊ မြန်မာပြည်က စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ သူတို့ကို တရုတ်အပါအ၀င် ဘယ်နိုင်ငံကမှ အယုံအကြည် မရှိပါဘူး။
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ အများကြီး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင် တို့ဆိုရင်၊ တိတိပပ လက်ညှိုး ထိုးပြီးတော့မှ ပြောစရာအပြစ်တစုံတရာ မရှိသေးပါဘူး။ လုပ်မယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်အတွက် အများ ကြီးလုပ်နိုင်တဲ့အနေ အထားမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင် ကိုယ်တိုင်၊ တရုတ်ကို လက်ခံချင်တဲ့လူမျိုး မဟုတ်ဘူး။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း တရုတ်က မြန်မာပြည်မှာ လူမျိုးရော စာပေ ယဉ်ကျေးမှုကော၊ အကုန် လွှမ်းလာပြီ ခင်ဗျ။ အဲဒါတွေကို လူထုက မခံနိုင်တဲ့အခါမှာ ၁၉၆၇ ခုနှစ်ကဖြစ်တဲ့ တရုတ်-မြန်မာအရေးအခင်းထက် ကြီးတဲ့၊ အရေးအခင်းမျိုးကြီး မဖြစ်ဘူးလို့၊ မပြောနိုင်ဘူး။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ လူထုတင် မကဘူး။ ဒီအခု စစ်ခေါင်းဆောင်တွေမှာလည်း မကြိုက်တဲ့လူတွေ ရှိနေမှာပဲ။ တရုတ်က မြန်မာပြည်ကို ခွစီးလာနေတယ်လို့ မြင်နေတဲ့လူတွေ ရှိနေမှာပဲ။
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ အားလုံး ဗျ။ အားလုံးပဲ။ ကျနော်သိသလောက် တပ်ထဲမှာက ကျနော်တို့ရှိစဉ် ကတည်းက၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင် အပါအ၀င်၊ ရဲဘော်လေးအထိ မေးကြည့်ပါ။ တရုတ်ကို ကြိုက်လား လို့ မေးရင်၊ ဘယ်သူမှ မကြိုက်ပါဘူး။ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ် အစပ်တွေမှာ၊ တရုတ် ရဲ့ပယောဂကြောင့်၊ တရုတ်ရဲ့(ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီတပ်တွေကို) အားပေးမှုကြောင့်၊ စစ်သည်အများအပြား ကျဆုံးခဲ့ရတာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ တပ်မတော်သားတွေအနေနဲ့ တရုတ်အပေါ်မှာ အထင်လည်း မကြီးဘူး။ အခု ဒါ၊ အမေရိကန်ကို ကိုလိုနီလက်သစ် ဘာညာပြောနေတာ။ တကယ်တော့ ကိုလိုနီလုပ်နေတာက တရုတ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။ တရုတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ ၊ မြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာ ဒီလိုပဲ ခံယူထားကြတာပါ ခင်ဗျ။
By ရော်နီညိမ်း စနေ, 21 မေ 2011
ပင်လယ်ထဲမျောပျောက်ဆုံး ရေလုပ်သားများရဲ့ ဇနီးသည်တွေ...
ကြံ့ဖွံ့ ပါတီ ရခိုင်ပြည်အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်ရင် ...
၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း တရုတ် - မြန်မာ ဆက်ဆံရေး ကစားပွဲ -...